हिंसा नियन्त्रण र सडक मानव व्यवस्थापनमा जोड – MechiTimesOnline
हिंसा नियन्त्रण र सडक मानव व्यवस्थापनमा जोड
in ब्यानर न्युज, समसामयिक
बिर्तामोड । महिला हिंसा नियन्त्रण र सडक मानवको दिगो व्यवस्थापनका लागि सबै सरोकारवालाबीच सहकार्य र समन्वयको खाँचो औल्याइएको छ । बुधबार बिर्तामोडमा ‘सडक मानवको व्यवस्थापन र महिला हिंसाको नियन्त्रणमा सरोकारवालाको भूमिका’ विषयमा भएको छलफलमा सहभागी सरोकारवालाले त्यस्तो औंल्याएका हुन् ।
विभिन्न रुप फेरिदै र विकसित हुँदै हिंसा बढेको र हिंसाकै कारण मानिस बेसहारा हुँदै सडकमा आइरहेको समेत सो अवसरमा बताइएको छ । १ नं. प्रदेशकी सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जसमाया गजमेरले महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन सके हिंसा न्यूनीकरणमा टेवा पुग्ने बताइन् । छलफलमा सहभागीले हिंसा नियन्त्रण र सडक मानव व्यवस्थापनका लागि राज्यमन्त्री गजमेरको ध्यानाकर्षण गराउँदै विभिन्न सुझाव राखेका थिए । गजमेरले प्रदेश सरकार मार्फत यो विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले महिला सशक्तिकरण ऐन बनाउनेदेखि लिएर हिंसा नियन्त्रणका लागि कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आफूले विशेष ध्यान दिने बताउनुभयो ।
त्यस्तै संवाद समूह झापाको ध्यानाकर्षण र पहलपछि प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट सडक मानवको उद्धार गरी विराटनगरस्थित मानवसेवा आश्रममा व्यवस्थापन गरिएको स्मरण गर्दै राज्यमन्त्री गजमेरले उनीहरुको अल्पकालीन वा दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा लागीपर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । प्रदेश सरकारले सडक मानवमुक्त प्रदेश बनाउन गरेको घोषणा कार्यान्वयनमा अग्रसर हुने जनाउँदै त्यस कार्यका लागि सबै सरोकारवालाको सहयोग जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
जिल्ला समन्वय समिति झापाकी उपप्रमुख मिना पराजुलीले हिंसाको कारण पत्ता लगाएर उपचार गर्नुपर्ने बताइन् । उनले झापाका सबै स्थानीय सरकारले सामुहिक रुपमा सेफ हाउस निर्माण र सञ्चालनमा अग्रसर हुनुपर्ने बताउँदै त्यसका लागि जिससले समन्वय गर्ने बताइन् । उनले उपयोगविहीन सरकारी तथा सार्वजनिक भवनलाई उक्त कार्यको लागि उपयोग गर्न सके स्रोतसाधनको बचत हुने समेत औल्याउनुभएको छ् ।
बिर्तामोड नगरपालिकाकी उपप्रमुख पवित्रा महतारा प्रसाईंले हिंसामा परेका महिलालाई उद्यमशील बनाउँदा भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । हिंसापीडित महिलाको आर्थिक सवलीकरणका लागि नगरपालिकाले पाँच लाख रुपैयाँसम्म अनुदानको व्यवस्था गर्ने उनको भनाइ थियो । सडक मानव उत्पादन हुन नदिन हिंसा रोक्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
झापाका प्रहरी प्रमुख कृष्णप्रसाद कोइरालाले जिल्लामा महिला हिंसा त्यसमा पनि यौनजन्य र घरेलु हिंसाको अवस्थाको बारेमा विश्लेषणात्मक तथ्यांक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँले हिंसा नियन्त्रण र सडक मानवको व्यवस्थापनका लागि हरेक वडाले कम्तीमा पाँच जना पीडित महिलालाई छनौट गरी सीप सिकाएर आत्मनिर्भर बनाउने कार्यको थालनी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । हरेक जिल्लामा एकीकृत पुनस्थापना केन्द्र बनाउन पनि उहाँको सुझाव थियो ।
बिर्तामोड नगरपालिकाकी कार्यपालिका सदस्य निता घतानी, वडा नं. १ का सदस्य तथा न्यायिक समिति संयोजक प्रेम खरेलले लक्षित समूहको पहिचान गरी न्याय दिन लागीपर्ने बताउनुभयो ।
संवाद समूहको संयोजनमा भएको छलफलको सहजीकरण अधिवक्ता खगेन्द्र खरेलले गरेका थिए । छलफलले चार बुँदे साझा निष्कर्ष पारित गर्दै आगामी दिनमा सोही बमोजिम काम गर्ने जनाइएको छ ।
३) झापामा सडक मानव व्यवस्थापनका लागि तत्काल सेफ हाउस स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउन पहल गर्ने । भविष्यमा झापा जिल्लालाई सडक मानवमुक्त जिल्लाको रुपमा लैजान आ(आफ्ना ठाउँबाट सहयोग गर्नेछौं ।
नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या ६६ हजार ६३२ नाघ्यो
झापामा एकैदिन १४ जनासहित देशभर १३१३ कोरोना पुष्टि